Abavelisi boomatshini bokuFaka iCarton--China
L800-A&L1000/2-IKhathoni yokuFaka iTreyi yoMatshini Owayesakuba kwibhokisi yebhega
Uthotho lwe-L lukhetho olufanelekileyo lokuvelisa iibhokisi ze-hamburger, iibhokisi zeetshiphusi, isikhongozeli sokuthatha, njl njl. Yamkela i-micro-computer, i-PLC, i-alternating current frequency converter, i-cam yombane yokutyisa iphepha, i-auto gluing, ukubala iphepha elizenzekelayo, i-chain drive, kunye inkqubo ye-servo yokulawula intloko yokubetha.
Umatshini wokwenza ibhokisi yesidlo sasemini
Isantya esiphezulu, ukusebenza kakuhle, ukonga amandla kunye nokhuseleko;
ukuveliswa rhoqo kwiinguqu ezintathu kunye neemveliso ezigqityiweyo zibalwa ngokuzenzekelayo.
Umatshini wekhowuni yephepha le-ice cream
Isantya esiphezulu 250pcs/min(kuxhomekeke kwizinto kunye nobukhulu)
Uxinzelelo lomoya 0.6Mpa (Umoya owomileyo nococekileyo wecompressor)
Izixhobo Iphepha eliqhelekileyo,Iphepha leMaluminium lefoyile,iphepha eligqunywe:80~150gsm,iphepha lewax elomileyo ≤100gsm
ML400Y Hydraulic Paper Ukwenza ipleyiti yomatshini
Iphepha Plate Ubungakanani 4-11intshi
Ubunzulu beBhola yePhepha ubunzulu≤55mm;ubukhulu≤300mm(ubungakanani bemathiriyeli ekrwada tyhileka）
Iimfuno zamandla 380V 50HZ
Amandla ewonke 5KW
ML600Y-GP Hydraulic Paper Ukwenza ipleyiti Machine
Ipleyiti yePhepha ubungakanani 4-15”
Iigram zephepha 100-800g / m2
Izinto zePhepha Isiseko sephepha, iphepha lebhodi elimhlophe, ikhadibhodi emhlophe, iphepha le-aluminium foil okanye abanye
Umthamo kwizitishi eziphindwe kabini 80-140pcs/min
Amandla ewonke 8KW
Uhlobo lwe-ML600Y-GP olunesantya esiphezulu kunye nomatshini wepleyiti yephepha olukrelekrele usebenzisa uyilo lwedesktop, olubeka lodwa iindawo zothumelo kunye nokubumba.Amacandelo okuhanjiswa aphantsi kwedesika, iimbumba zisedesikeni, olu luhlu lulungele ukucocwa nokugcinwa.Umatshini wamkela i-lubrication ngokuzenzekelayo, ukuhanjiswa koomatshini, ukubunjwa kwe-hydraulic kunye nephepha lokuvuthela umoya, elineenzuzo zokusebenza okuzinzileyo kunye nokusebenza okulula kunye nokugcinwa.Amacandelo ombane, i-PLC, ukulandelwa kweefoto zombane, zonke zombane ziyi-brand ye-Schneider, umatshini onesikhuselo sokukhusela, ubukrelekrele be-auto kunye nemveliso ekhuselekileyo, unokuxhasa ngokuthe ngqo umgca wemveliso.
I-MTW-ZT15 I-tray ye-Auto yangaphambili kunye nomatshini weglue
Isantya:I-10-15tray / min
Ubungakanani bokupakisha:ibhokisi Customer:L315W229H60mm
Ukunikezwa Amandla:2KW;380V 60Hz